Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya / Forex Renko Ishadi Strategies / Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy	Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy
Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy
Lelisu isebenzisa senzo intengo. Izinkomba Eziningana zisetjenziswa ukuze isu ukusebenza kangcono.
Landela imiyalelo ngezansi ukuze sithole isiqondiso sendlela ukusebenzisa isu:
Vula “naked” M1 ishadi unamathisele EA, isethi Libhala Ibanga @ 3 (Pips)
Vula ishadi Okungaxhunyiwe ku-inthanethi M2 kusuka pair ofanayo (bheka izithombe ngezansi)
Layisha isifanekiso etjhadini M2
shiya Njalo “naked” M1 ishadi evulekile !
Imakethe kumele ivule ukulayisha feed renko idatha.
Faka lapho bobabili amanani kanye Tenkan Sen niwele Kumo futhi ophumayo lapho bewela kolunye uhlangothi.
Pivot amaphuzu zibaluleke yokuqondisa TP Okuqondiwe.
SL kuyinto uhlangothi Kumo endaweni entry.
Sebenzisa SMA (Simple isilinganiso sokuhamba) 21 noma 100 ngoba reference on ukwesekwa kanye ukumelana level. Sebenzisa futhi 5 ishadi minute njengesiqondiso.
Kungenjalo ungakwazi ukuvula ehlukile 5M ichimoku ishadi abhekisela kuso ukuze bahlukanise retracement amaphuzu. Kubonisa Ngakho phambili esikhona manje uhlale kulo msebenzi noma wengeze isikhundla sakho kusuka izinto zizoshintsha amaphuzu okubonisa ekupheleni kwalesi mkhuba,
Ngakho uphume isikhundla sakho).
Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Isu inikeza ithuba lokuthi bazokwazi ukuhlonza izici ezihlukahlukene futhi amaphethini amanani dynamics okuyizinto ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy?
Thwebula Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy
Uzobona Kumo Cloud Forex Renko Ishadi Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
Abanye Forex StrategiesGoldflights Renko Ishadi Forex StrategyScalping Forex Renko Ishadi StrategyIsiteshi Forex Renko Ishadi StrategyUMAMA 6-12 Forex Renko Ishadi StrategyPK Scalping Forex Renko Ishadi StrategyRaitis Forex Renko Ishadi StrategyThenga bese Thengisa Forex Renko Ishadi StrategyKwezinzwa nge Donchian Forex Renko Ishadi Strategy